Ernesti Raazerfoordi - Wikipedia
Ernesti Raazerfoordi, Baaron Raazerfoordi Nilsan, (30 Hagayya 1871 – 19 Onkoloolessa 1937) fiizisistii Biriiten kan dhalootan Niwuu Ziilanditti ta'e yoo ta'u abbaa fiiziksii niwukilaaraa jedhamee beekkama. Insaayikiloppidiyaan Biritaanikaa Raazerfoordi nama yaalii hojjatu kan Maayikil Faradaay booda dhufe isa guddaadha jedha.
Hojiisaa isa jalqabaatin, Raazerfoordi walakkaa-jireenyaa (half-life) raadiyoo'aaktivitii argate, raadiyoo'aktiiviitin elementiin keemikaalaa tokko gara elementii kan biraatti jijjiiramuu ta'uusaa mirkaneesse, akkasumas raadiyeeshinii aalfaa fi beettaa adda baasee maqaa kanas kenneef. Hojiin kun Kanaadaa Yuunivarsiitii Makgiil keessatti hojjatame. Argannoo kanaafis Badhaasa Noobelii kan Kemistirii kan bara 1908 "qorannoosaa caccaba elementotaa fi kemistirii wantoota raadiyoo'aktiviitii irratti godheef" argate.
Bara 1907 Raazerfoordi gara Yuunivarsiitii Viktooriyaa kan Maanchister (amma Yuunivarsiitii Maanchister) YKtti (UK) godaane, achittis Toomaas Rooyidsi wajjin raadiyeeshiniin aalfaa niwukilasii hiiliyemii ta'uu mirkaneesse. Raazerfoordi hojiisaa hunda caala beekkamu erga looreetii Noobelii ta'ee booda hojjate. Bara 1911, yoo chaarjin sun poozatiivii ykn nageetivii ta'uusaa mirkaneessu dadhabeyyuu, Raazerfoordi chaarjiin atomii niwukilasii kan xiqqoo taate keessaatti baayyinaan kuufamee akka jiru tiyooresse. Kanaanis modeelii atomii Raazerfoordi bu'uuresse, kanas argannoo yaalii fooyilii warqee hojjate hiikun raawwate. Raazerfoordi "atomii cabsuu" kan jalqabaa bara 1917tti ri'aakshinii niwuukilaaraa naayitiroojinii fi paartikilii aalfaa gidduutti godheen hojjate, kana keessattis pirootoonii argate maqaa kanas kenneef.
Raazerfoordi bara 1919 daarekterii Laaboraatorii Kavendiish kan Yuunivarsiitii Kaambiriiji ta'e. Geggeessummaa Raazerfoordi jalatti niwuutiroonin bara 1932 Jeemsi Chaadwiikin argame, baruma sana yaaliin jalqaba niwukilasii haala too'atamaa ta'een addaan cabsuun hojjatame, kunis barattoota qajeelcha isaa jalatti hojjatan Joon Cockcroft fi Ernesti Waltonin hojjatame. Bara 1937tti erga du'ee booda, saayintistoota gurguddoo YK wajjin, awwaala Isaaq Niwuutenitti dhihoo Westiminister Abiitti, awwaallamuun kabajame. Elementiin keemikaalaa raazerfoordiyem (elementii 104) bara 1997 maqaa isaatti moggaafame.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernesti_Raazerfoordi&oldid=33906" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 2 Amajjii 2021, sa'aa 19:47 irratti.